Kpido: mmemme iguzosi ike n'ihe » Martech Zone
Kpido: mmemme iguzosi ike n'ihe dijitalụ
Ihe Mere Ikwesị Ntụkwasị Obi Na-enyere Aka Operụ Ọrụ Na-aga nke Ọma
Ịgụ Oge: 3 nkeji Site na mbido, mmemme nkwụghachi ụgwọ ikwesị ntụkwasị obi tinyegoro ụkpụrụ ị ga-eme. Ndị ọchụnta ego, na-achọ ịkwalite okporo ụzọ ugboro ugboro, ga-awụkwasị nọmba ahịa ha iji hụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ewu ewu na nke bara uru iji nye ha dị ka mkpali na-akwụghị ụgwọ. Mgbe ahụ, ọ gawara ụlọ ahịa na-ebipụta akwụkwọ iji bipụta kaadị ntụmadị ma dị njikere ibunye ndị ahịa. Ọ bụ atụmatụ egosipụtara nke ọma, dịka eziokwu site na eziokwu ahụ ọtụtụ
Page 1 nke 1
Categories Họrọ Atiya Adtech Nchịkọta & Ule content Marketing data Ecommerce na etalọ nkwari akụ email Marketing Teknụzụ na-apụta Mmemme Azụmaahịa Vidio Ahịa & Ahịa Akwụkwọ Ahịa Ihe omume Infographics Ahịa Ngwaahịa Ahịa Ọzụzụ Azụmaahịa Mobile na Mbadamba ụrọ Mmekọrịta ọhaneze Nkwado ire ahịa Chọọ Marketing Social Media Marketing
Ravi Chalaka: Mogafe Ahịa na Marketingzụ ahịa na Mgbakọ na Nzukọ
na nke a Martech Zone Ajuju ajuju, anyi na agwa Ravi Chalaka, onye isi ahia ahia na VP nke ahia ahia na Jifflenow, nzuko nzuko nzuko. Dika ulo oru kpochapuru nzuko na nzuko nke mmadu, ma kpalie ndi ahia ha na ndi ahia ka ha aru oru site na ulo ha gha aghagide otutu nsogbu. Site na nkwukọrịta site na vidiyo…
Katie Mares: Uzo di iche iche nwere ike ige nti ma zaghachi ndi ahia ha kachasi ...
na nke a Martech Zone Ajụjụ ọnụ, anyị na-agwa Katie Mares, onye edemede nke arningkpata Azụmaahịa Ya: Mkpa nke lokwado Ahụmịhe Ahịa Gị Nye Ndị Ahịa. Ọ bụ ezie na ụmụ nwanyị na-etinye aka na ụwa anyị na ndị mmadụ na-ekwusa ike ụmụ nwanyị, Katie ahụla na echiche a abanyebeghị azụmaahịa azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa ahụmịhe experience
Torchlite: Ahịa nke obere azụmaahịa azụmaahịa dị mkpa "Flexperts"
na nke a Martech Zone Ajụjụ ọnụ, anyị gbara Susan Marshall, onye nchoputa na onye isi oche nke Torchlite. Susan na-ekere òkè na mmekorita nke nzukọ ahụ ma na-elekwasị anya na ịkwado obere ụlọ ọrụ na ntinye aka na nkwado nkwado Salesforce. Salesforce Mkpa bụ CRM nke edoziri maka obere azụmaahịa sitere na Salesforce. Na ezi ụdị Salesforce, enwere ike ịhazi ikpo okwu a…
PHP na SQL: Gbakọọ ma ọ bụ Ajụjụ Anya N'etiti Points nke Latitude na Longitude
N’ọnwa a, anọla m na mmemme nke ọma na PHP na MySQL n’ihe gbasara GIS. Na-ehulata gburugburu net ...
Nyochaa Ndepụta Email Gị N'ịntanetị: Gịnị kpatara, Kedu, na Ebee
Otu esi enyocha ma chọta ọrụ nkwenye email kachasị mma na weebụ. Nke a bụ ndepụta zuru ezu nke ndị na-enye ọrụ dịka ...